एभरेस्टमा ठेलमठेल सपना- विविधा - कान्तिपुर समाचार
जेष्ठ १८, २०७६ अभि सुवेदी
काठमाडौँ — गणतन्त्र दिवस, समारोह कहीं हुँदै छन् । ठूलो जाम पार गरेर फर्केको छु । यसै अन्यमनस्क, बीबीसी रेडियो खोल्छु । भन्दैछ, झन्डै २५० जना आरोही ठेलमठेल गरेर एभरेष्ट चढ्दैछन् । त्यसो त २ सय जनाले चढिसके । ‘देथ जोन’ अथवा ८००० मिटरमाथिको मृत्यु क्षेत्रमा पालो पर्खेर उभिनु आफैंमा डरलाग्दो कुरा हो । त्यसमा एघारौं एभरेष्ट आरोहीको शिखरमा पुगेपछि हृदयगति बन्द भएर मृत्यु हुन्छ । सुनेर दिक्क लाग्छ ।
अझ एकाएक समाचार वाचकले थप्छ– नेपालका नीति बनाउनेहरूको अव्यवस्थाको कारणले यसरी दुर्घटना भएको हो । भन्छ, नेपालमा भ्रष्टाचार धेरै छ । संसारको सर्वोच्च शिखरमा ज्यान बचाउन पनि घुस दिनुपर्ने अवस्था छ । अनि लाग्छ, म पनि कुनै हिमपहिरोबाट चिप्लेर खस्तैछु ।
यसरी खस्तैछु, जसमा खसेर कुनै दैहिक चोट लाग्दैन, कुनै अर्को सतहमा पुगिँंदैन । कुनै अभियान बीचैमा रोक्नुपर्ने पनि हुँदैन । यो यस्तो चिप्लेँटी हो, जसबाट हामी प्रभावित छौं । मलाई दिक्क लाग्छ, सम्झिन्छु, हाम्रोमा भ्रष्टाचार अब एउटा शब्दमात्रै रहेन । झस्किन्छु, त्यो एउटा राष्ट्रिय यथार्थ भैसक्यो कि ।
पर्यटकहरू हिमाली यात्रामा बिमारी भएर हेलिकप्टरबाट ल्याएको, अस्पतालहरूमा भर्ना गरेको आदि प्रपञ्चका न्यारेटिभ पनि पढ्दै र सुन्दै आएको छु । ‘इन्भेस्टिगेटिभ’ पत्रकारहरूले यो कथाले अन्तर्राष्ट्रिय रूप लिएको वर्णन निकालिसकेका छन् । लाग्छ, यस्तो अवस्था आउनुमा खासै योजनामा ध्यान नदिने सरकार, आरोहण गराउने संस्था र स्वयं आरोही पनि जिम्मेवार छन् ।
एउटा कुरा प्रस्ट छ, एभरेष्टले अब २९ मे १९५३ मा तेन्जिङ नोर्गे र एडमन्ड हिलारी पहिलोपटक शिखरमा पुगेको उत्तेजना बोक्दैन । आफैंले पहिले लेखेको ‘फ्लानको डायरी’ (२०७२) मा संग्रहित निबन्धका यी हरफहरूका पुनः पाठ गर्छु, ‘एभरेष्ट विजयको रजत जयन्तीको उपलक्ष्यमा अलजजिरा टीभीले त्यो बेला खिचेका एकाध छोटा फिल्मका झलक देखायो । त्यसमा एउटा दृश्यले मलाई छोयो ।
त्यसमा तेन्जिङ र हिलारीलाई विजय यात्राबाट फर्केपछि लिन गएका मानिस फटाफट हिंँडेको देखियो । तीमध्ये नाटककार बालकृष्ण सम साथै हिंँडेको दृश्यले भूगोल र नेपाली चिन्ताको सह–नाटक गराएको देखियो । समले सूत्रधार भएर बोले, ‘अब सगरमाथामाथि एकजना मानिसको उचाइ थपिएको छ ।’ त्यस घटनापछि हजारौं मानव उचाइहरू उठ्दै र बिलाउँदै गएको त्यो महान चुचुरो अहिले पुँजीयुगका उपभोक्ताको तारो भएको छ । एभरेष्टको नामकरण अनि उचाइका मोहको विषयमा धेरै उत्तर–औपनिवेशिक छलफल भएका छन् ।
नापी विभागका कर्मचारीहरू यही बेला एभरेष्टको उचाइ नाप्न ज्यान जोखिममा पारेर त्यहाँ पुगेको अनि काम सम्पन्न गरेर फर्किंदा भीडमा झन्डै ज्यान गएको कथा अहिले व्याप्त छ । नवऐतिहासिक चेतनाले हेर्दा यी नेपाली कर्मचारीहरूको महत्त्व धेरै छ । यिनीहरूमध्ये एकजनाले दुइटै पाउ आधा–आधा गुमाएका छन् । यिनीहरूले नापेको उचाइ सार्वजनिक हुनेछ । इतिहासतिर फर्किनुपर्छ । एभरेष्टको उचाइ पहिले पत्ता लगाउने एकजना राधानाथ सिक्दार (सन् १८१३–१८७०) थिए ।
ती साधारण बंगाली गणकले एक सपना देखेका थिए । सर्भे अफिसका यी सबाल्टर्न कर्मचारीले एभरेष्टको उचाइको हिसाब निकाल्ने जिम्मा पाएका थिए । निकै प्रयासपछि तिनले एभरेष्टको मूलतः अहिले मानिएको उचाइ पत्ता लगाए । अनि उनका हाकिम कर्नेल एन्ड्रयु वगलाई अत्यन्त खुसी भएर पत्र लेखे ।
पत्रमा यसो भने, ‘सर, मैले संसारको सबभन्दा उच्च शिखर पत्ता लगाएँ ।’ उनले सोझै ठाने, अब यो शिखरको नाम राधानाथ सिक्दार चुचुरो रहनेछ । उचित सपना थियो, वैध सपना थियो । तर औपनिवेशिक भारतमा त्यो कसरी लागू हुन्थ्यो र ? शिखरको नाम राधानाथ सिक्दार पर्वत नराखेर एन्ड्रयु वगले जर्ज एभरेष्ट नामका एकजना साधारण कर्नेलको नाममा नाम राख्ने प्रस्ताव गरे । ती एभरेष्ट एक असम्बद्ध मानिस थिए । कथा छन् ।
यहाँ लेख्ने ठाउँ छैन । तर त्यो कुरा ब्रायन हडसन भन्ने त्यहांँका एक तल्लो तहका युवक अफिसरले यतैतिरका मानिसको नाम राखिनुपर्छ भनेर विरोध गरे । ती मानिस पछि नेपालमा ब्रिटिस रेजिडेन्ट दूत भएर निकै वर्ष बसे । तिनको विषयमा धेरै लेखिएको छ । त्यो चुचुरो नेपालमा थियो, तर खासमा त्यो नेपालीलाई नै थाहा थिएन । पछि बाबुराम आचार्यले सगरमाथा भनी नेपालमा यसको नामकरण गरे । यस चुचुराको स्थानीय नाम चोमोलोङमा हो । तर त्यो नाम शेर्पाहरू आफैंले पनि त्यति प्रयोग गरेको देखिएन ।
एभरेष्टको उचाइ, यसको उत्तुङ कलेवरले खिचिएर इतिहासमा कीर्ति स्थापना गर्ननिम्ति होइन, यसमाथि चढेर एउटा सामर्थ्यको पहिचान दिने, औपनिवेशिक भाष्यमा भन्दा एउटा जितको परिचय दिने चाहनाको रूपमा चढेका छन्, इतिहासमा आरोहीहरू । यो चेतना उन्नाइसौं शताव्दीमा अंग्रेजी उपेनिवेशको चेतनासँग जोडिएको छ । जसरी पनि जित्नुपर्ने, केही ज्ञान छ भने त्यो जान्नैपर्ने, आफैंले जित्नुपर्ने अंग्रेजी चेतनासँग जोडिएको थियो, यो विषय ।
पहिले एभरेष्ट चढे कि भन्ने आशंका गरिएका तर बेपत्ता भएका युवक आरोही जर्ज मेलोरीलाई सोधियो, ‘तिमी किन एभरेष्ट चढ्छौ ? उनले भनेका थिए, ‘प्रस्टै छ नि त्यो महान आकार ऊ त्यहाँ ठडिएको छ, त्यसैले ।’ त्यो छ र चढ्नुपर्छ भन्ने ब्रिटिस साम्राज्य चेतनाको पर्याय थियो । उत्तर र दक्षिण ध्रुव पत्ता लगाइसकिएको अवस्थामा यो एभरेष्ट तेस्रो ध्रुवको रूपमा रहेकाले यो पनि हामीले नै पहिले जित्नुपर्छ भन्ने आङ्ल चेतना थियो । कर्णेल हन्टले महारानीलाई यो विजयको कथा यसरी नै सुनाएका थिए ।
दार्जिलिङ निवासी तेन्जिङको राष्ट्रियताको विषयमा तरङ्ग उठे । जुलाई ४, १९५३ को डेली मिरर अखबारमा दुइटै हातमा नारी घडी बाँधेका हातले हँसिलो अनुहारले नमस्कार गर्दै नेहरूले दिएको खद्दरको लुगा लगाएका तेन्जिङको श्रीमतीसहितको लन्डनमा पुगेको फोटो छापियो । दुबै हातका घडीको एउटा सरल चित्रका अनेका व्याख्या भए । नेपाल त्यो बेला धर्मराज थापाको ‘हाम्रो तेन्जिङ शेर्पाले चढ्यो हिमाल चुचुरा’ भन्ने गीतले गुञ्जायमान थियो ।
तर आज एभरेष्ट उपभोक्तावादी युगमा नेपालमा घुस दिइन्छ भन्ने कथा बोक्दै मानिसको भीड चढाएर के हासिल गर्दैछ र यसले अहिले नेपालको कीर्तिमानलाई कसरी कायम गरेको छ भन्ने कुरा बुझिनसक्नु छ । त्यसो त तेन्जिङकै शेर्पा परम्परामा एभरेष्ट चढ्ने ४९ वर्षका कामिरिता शेर्पा २४ पटक शिखरमा पुगे । जेठ १, २०७६ को दिन तिनले एक हप्तामै दुईपटक एभरेष्ट चढे । एभरेष्ट चढाउने शेर्पाहरूको निजत्व र उनको योगदानबारे त्यति जानकारी प्रकाशित हुँदैनन् ।
एभरेष्ट आरोहण रूपक र बहादुरीको ‘मेटाफोर’ मान्नेहरू अब पश्चिमीमात्रै रहेनन् । पर्वत आरोहणलाई भन्ने विषय नेपाली राजनीतिमा चर्चामा आइबस्छ । राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू, कीर्तिमान कायम गर्ने युवा वर्गका मानिस अनि देशले समर्थन गरेका समूहहरू एभरेष्ट चढेर आएको इतिहास छ । केही वर्षअघि एकजना अंग्रेजी एमफिल कक्षाकी थोरै बोल्ने, शान्त प्रकृतिकी माओवादी आन्दोलनकी अन्तरङ्ग महिला विद्यार्थीले भनिन्, ‘म एभरेष्ट आरोहणका महिलाका अन्तरकथामाथि थेसिस लेख्न चाहन्छु ।’
मैले भने, ‘यसको विषयमा तिमी कसरी जानकारी लिन्छ्यौ ?’ उनले भनिन्, ‘म केही समयअघि एभरेष्ट चढेर आएकी ।’ मेरो सामु मेलोरी, तेन्जिङका दुई नाडीमा बाँधेका घडी, अनि एभरेष्ट र उत्तर–औपनिवेशिक डिस्कोर्स एकैसाथ चक्रवात भएर आए । मैले पहिलो कुरा उनलाई केही किताब र लेख पढ्न लगाएँ ।
८ वर्षअघि, पहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य, २०१७ सालपछि जेल बसेका, पछि पञ्चायत शासन प्रणाली मानेर मन्त्री र कूटनीतिक सेवामा काम गरेका, प्रेमराग र राजनीतिलाई जोडेका अनि जीवनको अन्तिम प्रहरमा एभरेष्ट चढ्न जाने मान्छे शैलेन्द्रकुमार उपाध्यायको एभरेष्ट आरोहणको क्रममा मृत्यु भएको समाचार मेरोनिम्ति वाचाल विषय थियो । त्यसो त वृद्धहरूले एभरेष्ट यथाकदा चढेका छन् ।
तर मैले कान्तिपुर (२ जेठ २०६८) मा एउटा ओबिचुअरी शैलीमा शैलेन्द्रकुमारको यसरी शव्दचित्र उतारेको थिएँ, ‘राजनीति र कूटनीतिमा आधुनिक नेपाली समयकै चर्चित एउटा बयासी वर्षको वृद्ध मानिस एभरेष्ट अभियानमा जाँदा आधार शिविरको परिवेशमा हृदयगति बन्द भएर दिवंगत भएको कुराले मलाई निकै तानेको छ । एउटा वृद्ध मानिसका झिना खुट्टामा पर्वतारोहीले लगाउने सुरुवाल यसो बाङ्गो भएको अनि उसले याक्स बोकेर चढ्न लागेका चित्र छापामा आए ।’
एभरेष्टको सपनाबाट एकाएक निस्किन्छु । हामीलाई ‘अल्टिच्युड सिकनेस’ होइन, उचाइ पार गर्ने उत्तेजना धेरै भएको छ । हामी एभरेष्ट र हिमालको उतापट्टि जोडिन आतुर मानिसका अभियानका सपना रेलमार्गले पूरा गर्ला कि त । तर एभरेष्ट एक प्रिय पर्वत हो, जहाँ विश्वभरिकै मानिस उनका सपनाका कुँडाकर्कट लगेर थुपारिन्छन् । यसलाई मर्यादा, माया र इज्जतले प्रयोग गरौं, बेथितिका योजनाले होइन । यसमा हाम्रै दायित्व ठूलो छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७६ ०८:३८